Sacuudi Carabiya iyo Russiya oo heshiis cusub oo Nuklear ah kala saxiixday – Kasmo Newspaper
Sacuudi Carabiya iyo Russiya oo heshiis cusub oo Nuklear ah kala saxiixday
Updated - December 15, 2017 3:11 pm GMT
London (Kasmo), Xarunta “Boqor Cabdalla” ee Sacuudi Carabiya u qaabilsan Tamarta Nuklearka ee dib loo cusboonaysiin karo (Renewable Energy) ayaa la saxiixatay, Heshiis Iskaashiga Tamarta ah, Shirkadda Rosatom ee Ruushka.
Dhanka Sacuudiga waxaa heshiiska u saxiixay, Maher Abdallah Alodan, Agaasimaha Xaruntaas, dhanka Ruushkana, Evgeny Pakermanov, Guddoomiyaha “Rosatom Overseas Inc” oo ah faraca suuqgaynta Teknoloojiyada Nuklearka Russiya ee dibadda ee Shirkadda Rosatom.
Heshiisku wuxuu marayaa marxalado, (Road Map), kala horreeya oo lagu hirgalinayo barnaamij Iskaashi isticmaalka Tamarta Nuklearka oo dhanka nabadgalyada ah, taas oo lagu saxiixay Moskow, 5tii Oktoober 2017, xilligii booqashadii taariikhiga ahayd ee Boqor Salman bin Cabdulcasiis.
Russiya iyo Sacuudi Carabiya, sida barnaamijku qabo, waxay iska kaashan doonaan soo saarista mashiinno (Reactors) yaryar iyo kuwo dhexe oo loo adeegsan karo curinta Tamar milixda looga sifeeyo biyaha badda.
Labada dal waxay isla qorshaynayaan hawlo wadajir ah oo dhinaca tababarka shaqaalaha barnaamijka Qaran ee Nuklearka Sacuudiga iyo kaabayashiisaba.
Waxaa kale oo ay isla gorfayn doonaan sidii mustaqbalka Sacuudiga looga dhisi lahaa Xarun weyn oo cilmi-baarista Atoomigga ah oo uu saldhig u yahay “Reactor” lagu soo farsameeyay Russiya.